New The Jeep Wrangler Isku-darka Isku-darka
Waqtiga cusboonaysiinta: 2020-10-29 15:41:04
Kuwani waa sawirradii ugu horreeyay ee nooca isku-dhafan ee jiilka cusub ee jiilka cusub ee JL ee Jeep Wrangler. Sawir qaadayaasheena basaasku waxay ku guuleysteen inay soo qabtaan mid ka mid ah unugyadii tijaabada ee ugu horeeyey inta ay ku wareegayeen habka korantada aamusnaan guud.
Intii lagu guda jiray horumarinta jiilka cusub ee Jeep Wrangler Waxaan horeyba kaaga dignay, jiilka cusub ee JL ee astaanta u ah waddada ayaa lahaan doona nooc cusub oo isku-dhafan oo isku-dhafan oo kala duwan. Noocani waxaa xaqiijiyay astaamaha laftiisa wax yar uun ka dib markii qaabka la soo bandhigay, laakiin illaa iyo hadda ma jiro wax tusaale ah oo noocan ah korantada la arkay. Tani Jeep Wrangler mode wuxuu kaloo adeegsadaa 9 inji Jeep Wrangler led headlights, DOT SAE ansixiyay, amaan ku ah wadada.
Kuwaas oo sawiradan aysan kufilaan karin, sawir qaadayaashayagu waxay raacayeen muunadan dhowr kilomitir waxayna awoodeen inay arkaan sida ay ugu rogmatay qaab koronto sidaas darteedna, aamusnaan buuxda. Inta lagu jiro waqtigaas oo dhan, xawaaraha ugu badan ee tan Wrangler qaybta imtixaanku waxay ahayd qiyaastii 40 km / saacaddii, illaa daqiiqadda uu darawalku xawaareynayay, xawaare ka dheereeyay oo kiciyay mishiinka gubashada.
Waqtigan xaadirka ah, midkoodna qeexitaannada noocaan korontada ku shaqeeya lama xaqiijin, laakiin waxaa la filayaa inay lahaan doonto isla qaab isku mid ah sida Chrysler Pacifica Hybrid, maadaama ay la wadaagayso Wrangler mishiinka 3.6-litir V6 Pentastar ah ee ay u isticmaasho minivan-ka korantada ku shaqeeya.
Sida ku saabsan soo bandhigiddeeda suurtagalka ah, waxaa la filayaa in qaabkan cusub la soo bandhigi doono dhammaadka sanadkan. Sida noocyada joogtada ah ee Wrangler oo cusub Jeep Gladiator, which were presented respectively at the 2017 and 2018 editions of the Los Angeles Auto Show, this new electrified version would be the brand's first for the next 2019 edition of the Californian event.
Previous: New The Jeep Gladiator Ayaa Soo Saaray Qareenka Khadka Internetka
Xiga: miyuu Jeep Gladiator J6 Falanqaynta Fikradda Mustaqbal 2-albaab oo Kala Duwanaansho ah?